Noocyada Fariin on Electric Iskeetboodhyada - Jomo Technology Co., Ltd
In wax kasta oo korontada ah, waxaa jira noocyo dhawr hoose ee braking- firfircoon, khilaaf, iyo Fariin regenerative. Kulligood waxay u isticmaalaan habab kala duwan ee hoos gaabis gaariga.
biriiga khilaaf waa nooc ka mid ah taayarada loo isticmaalo on baabuurta caadiga ah. Muhiimad ahaan, khilaaf ka dhanka ah disc jejebiyey ah waxaa loo isticmaalaa si loogu badalo tamar ogeed (dhaqdhaqaaqa baabuurka) galay kulaylka, taas oo yaraysa gaariga. A wadada baaskiilka joogto ah sidoo kale wuxuu isticmaalaa khilaaf si aad u yarayso hoos by tirtirayaan suufka jejebiyey ka dhan ah qar hoose oo wheel baaskiil ee.
rullebrett Electric guud ha isticmaalin biriiga khilaaf maxaa yeelay, waxay u baahan tahay farsamo hardware weyn in xirtaa baxay.
brushless Outrunner motors- nooca ugu badan ee baabuurta loo isticmaalo on korontada muhiimad rullebrett-yihiin go'an magnet-joogta ah agagaarka xudunta u ah boogta silig copper ee wareegyada si marka hadda korontada la eryay iyada oo silig, waxay abuurtaa beer magnetic in riixo on ballamay magnet-joogto ah, taasoo keenta motor si isku shaandheyn. The fiilooyin, namana daaliyaan dhigi electromagnet ah. Waxa ugu qabow ku saabsan magnet waa in saamayn ka soo horjeeda ay jiradu kartaa haddii aad isku shaandheyn giraanta magnetic agagaarka silig naxaas ah, waxaa barayaa hadda korontada ee xarkaha. Tani waa maamulaha aasaasiga ah ka dambeeya labada hababka kala jejebiyey firfircoon iyo regenerative, iyo sida matoorada korontada.
Fariin Dynamic waa nidaam caadi ahaan loo isticmaalo by tareen tareen. In nidaamka this, tamarta ogeed waxaa beddelay kulaylka by wareejinta korontada ee ay matoorrada fur galay resistor ah, taas oo ka dibna baaba'aan tamarta sida kulaylka. Marka magnet-ka ee motor ah u abaari hadda ah in fiilooyin copper ah, iska caabin ah ahbaa, gaabis fur motor ah.
Sida maanta, waxaa jira mid lagu skeidgareeyo korontada isticmaala Fariin firfircoon lala Fariin regenerative.
rullebrett Electric horrayn isticmaalaan nidaamka la yiraahdo "Fariin regenerative". Tani waxay la mid tahay Fariin firfircoon, marka laga reebo halkii dhidbidda korontada galay resistor a dhereggu tamarta sida kulaylka, waxaa dib batteriga ku wareejiyey, waxaa recharging.
Arrinta hoose la nidaamyada regenerative waa in marka batari waxaa ka buuxa, ma aqbali karaan wax ka badan hadda oo aan Xammuul oo burburiyeyna batteriga. Taas darteed, loox oo keliya isticmaalaan Fariin regenerative dhab lumin doonaa awoodda oo dhan si ay u kala jejebiyey ka dib markii batari ku dhufan 100% lacag.
Guddiyada la mid ah Guddiga Koowheel ama Board la xoojiyey cod doonaa wax yar ka hor biriiga soo gooyay, laakiin tani badanaa ma aha filan oo ay ku keeni rag fuula u hureen in damiin off guddiga. Tani waa sababta ay muhiim ah in aad had iyo jeer ku gartaan si loo cagta jejebiyey xawaare kasta waxaad kortaan aad skeidgareeyo korontada at. Faa'iidada weyn oo Drive mellow waa in ay isticmaasho ay braking- regenerative oo firfircoon labada mar batteriga waxaa ka buuxa (iyo marka biriiga loox kale ee gooyn lahaa gebi ahaan), waxaa badalato si ay u Fariin firfircoon oo weli kuu ogolaanayaa inaad hoos si aad u yarayso.